हाम्रो सरकार जिन्दावाद - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बिश्व स्वास्थ्य सँस्था WHO ले नेपाल लगायत बिश्वभर COVID-19 को महामारी फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको १९ दिन पुग्दा पनि लाखौंका प्रिय युबा मन्त्री योगेश जि – Nepal covid -19 free zone भन्दै भिडियो बनाएर पर्यटक भित्राउन खोज्दा हामी औधी खुसी मनायौ । हामीले ताली बजायौ
– किनकि हामी ने क पा को खाटी कार्यकर्ता , शुभचिन्तक
बिश्वब्यापी फैलिदै गएको महामारीसङ्ग के को चासो हामीलाई ?? योगेश जिको इमान्दार भक्त जसरी हुन्छ उहाँलाई सफल मन्त्री बनाउनु थियो । रोग भित्रीएर के भो र ?? धेरै पर्यटक भित्राएर देशको अर्थतन्त्र र भ्रमण बर्ष सफल पार्नु थियो । अर्को चुनाब पनि नजिकिदै थियो ।
एकाएक यो महामारी जब इटली , स्पेन र अमेरिकातिर फैलिन शुरु गर्यो तब नेपालमा पनि बिस्तारै यसको भय महसुस हुँदै गयो । सामाजिक संजालमा काम नपाएका , काम गर्न जागर नभएका र अनपढ गवारहरु खाडीमा बसेर बाक्लो आलोचना गर्न थाले । अलि अलि पढेर युरोप अमेरिका गएकाहरु पनि खाडीवालाको स्वरमा स्वर थपे ।
हाम्रो सरकार यति गम्भीर थियो कि संक्रमण बिरुद्धको तयारी लगभग सकिसकेको थियो । मात्रै बाँकी थियो त्यो राक्षसी कोरोना मात्रै आउन …..नभन्दै त्यो पनि आयो एक पछि अर्को गर्दै ५ पुगिसक्यो । सरकार पुर्ण तयारी अबस्थामा भएकोले डराउने कुरै भएन । डाक्टर सुन्दरमणि नाउँ मात्रैका सुन्दर मन चाहिँ अलि कुरुप नै रहेछ। कुनै स्वार्थ , अबसर र पदको लोभ नगरी फ्याट्टै सरकारले परिक्षण नै नगरि रोग लुकायो भनिदिए …??
हैन यी डाक्टर साबलाई कुनै अबसर र स्वार्थको हेक्का नराखी किन प्वाक्क बोल्नु परेको होला ?? के हुँदै नभएको रोगको परिक्षण र टेस्ट गरेर किन आर्थिक नोक्सान गर्नु ?? किन रास्ट्रको ढुकुटी रित्ताउनु भनेर पुरै तयारी गरेर सुतेको हाम्रो सरकारलाई यिनै लुते डाक्टरले जगाईदिए ।
चार हजार प्रतिसेट पिपिआईलाई १५ हजारमा , १ हजार ५०० पर्ने थर्मोमिटरलाई ७ हजार र १.४० रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई १० रुपैयाँ भनेर लेख्न भ्याएछ। हैन कति सार्हो चासो चाहिएको हो त्यो अनलाईन मिडियालाई ?? जतिमा किनेपनि जस्तो किनेपनि किन रोईलो गर्नु कता नै आफ्नै घर घडेरी बेचेर पैसा दिए जस्तो गर्छ त्यो हाम्रो कुरा डट कमले ?? यति दुख गरेर जाबो अलिकति तलमाथि गर्दापनि हाम्रो सरकारको बिरोध गर्ने ?? आमाले एक किलो चिनी लिन पसल पठाउँदा २ रुपैयाँ बढाएर लुकाउनेहरु नै सबैभन्दा बढी हाम्रो सरकारको बिरोध गर्या कुरा हामीलाई थाहा छैन र ??
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, चैत १५ २०७६ २०:१९:४२